သူများဆီကအချစ်တွေကိုမတောင်းတခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားချစ်တတ်ဖို့အရင်ကြိုးစားစေလို – Trend.com.mm
Posted on July 14, 2018 July 9, 2018 by Shun Lei Phyo
တစ်ခြားသူတွေဆီကတန်ဖိုးထားမှုကိုခံယူချင်ရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်ကြိုးစာသင့်တယ်ဆိုတာ လူတစ်ချို့ကမေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးမထားချင်တဲ့လူတွေကြားမှာ အတင်းလိုက်ယူရင်းပင်ပန်းနေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သူများရဲ့တန်ဖိုးထားမှုသူများရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုခံယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဦးစွာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်ချစ်တတ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် …
လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်တွေစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ကိုဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းချင်တယ် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စစ်မှန်ပြီးမှန်ကန်တဲ့
(၂) လုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်ဦးတည်ချက်ရှိပါစေ
ကိုယ်လုပ်သမျှအရာတိုင်းဟာသူများအတွက်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ့်အတွက်တော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဦးတည်ချက်ရှိရှိ လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါစေ။လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာကိုလုပ်လို့လုပ်မိမှန်းဘာကိုယုံကြည်ပြီးလုပ်နေမှန်းမသိပဲရည်ရွယ်ချက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အရာရာကို လုပ်ဆောင်လာတာကြာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းပါးလာပြီးစိတ်ဓာတ်ကျကာ အလိုလိုစိတ်အားငယ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တော်ရုံတန်ရုံနေရာမှာ သူများကို အားမကိုးပဲလုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ကြည့်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိမှသင့်ဘ၀အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ မျိုးကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ ဒီနည်းကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့်
သူများကိုသိပ်အားမကိုးပဲ တစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့အရာတွေကြရင်တစ်ယောက်တည်းလုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစကိုလည်းပိုပြီးမြင်သာလာပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်လုပ်ရမဲ့အချိန်မှာထိရောက်ပြည့်ဝစွာ အလုပ်လုပ်ပြီးနားမဲ့အချိန်မှာအပြည့်အ၀အနားယူပါ။ ဘယ်သူမှအနားမပေးရင်တောင်ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် လုံလောက်တဲ့အနားယူမှုမျိုးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးပါ။
ကိုယ့်အတွက်ချီးကျူးသံတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးပါ။ နေ့စဉ်ကိုယ်လုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အနည်းအများရယ် ထည့်မထွက်ပဲ ငါလုပ်နိင်သားပဲငါတော်တေယ်ငါတိုးတတ်လာပြီဆိုပြီး သူများ ကချီးကျူးစကားမဆိုရင်တာင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ချီးကျူးစကားဆိုရင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုတတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ပါ။
(၆) ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို ဘယ်တော့မှမလိမ်ညာပါနဲ့
ဒါကတော့အဓိကအချက်ပါပဲ။ လူတစ်ယောက်အတွက်အပြစ်အကြီးဆုံးဒုက္ခအများဆုံး လိမ်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လိမ်ခြင်းပါပဲ။ လူတစ်ချို့က အဖြစ်နိုင်မှန်းသိလျက်နဲ့ဆွဲထားခြင်းတဲ့အရာမျိုးတွေ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိလျက်နဲ့ မခွဲခွာ နောက်မဆုတ်ချင်တဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကို ပါ ကိုယ်ပြန်လိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကိုယ်တကယ်ကြိုက်တဲ့အရာတွေ ကိုယ်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားပြီး မလိုချင်ဟန်ဆောင်ရင်းကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအမှန်ကို ဖွက်ထားရင်း နေရတာဟာ သိပ်ကိုပင်ပန်းလှတာမလို့ ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စိတ်မ၀င်စားပဲကိုယ့်ပုံစံကိုယ့်အကြိုက်တိုင်းပဲ ကိုယ်ရှင်သန်ပါ။
ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်တန်ဖိုးထားတတ်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ဆီက မေတ္တာတွေတန်ဖိုးထားမှုတွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီးဘယ်အချိန်ပေးမလဲ မျှော်လင့်နေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်သိတဲ့သူအနားမှာ မင်းတန်ဖိုးကိုနားလည်လာတဲ့လူတစ်ချို့ရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူများဆီက မေတ္တာတွေတန်ဖိုးထားမှုတွေကို ကြိုးစားရယူနေမဲ့အစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်နေရင်း အလိုလိုဖြစ်လာမဲ့ လူတစ်ချို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကိုအဆင်သင့်လေးရယူနိုင်ပါစေ….
တဈခွားသူတှဆေီကတနျဖိုးထားမှုကိုခံယူခငျြရငျအရငျဆုံးကိုယျ့ကိုယျကိုယျတနျဖိုးထားတတျအောငျကွိုးစာသငျ့တယျဆိုတာ လူတဈခြို့ကမလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။တဈခါတဈရံမှာ ကိုယျ့အတှကျခကျခဲတဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုယျ့ကိုယျတနျဖိုးမထားခငျြတဲ့လူတှကွေားမှာ အတငျးလိုကျယူရငျးပငျပနျးနတေတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ သူမြားရဲ့တနျဖိုးထားမှုသူမြားရဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုခံယူခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဦးစှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတနျဖိုးထားတတျအောငျခဈြတတျအောငျလုပျဖို့လိုပါလိမျ့မယျ …
လူတိုငျးမှာကိုယျပိုငျရညျမှနျးခကျြတှစေိတျကူးစိတျသနျးတှရှေိသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝကိုဘယျလိုလြှောကျလှမျးခငျြတယျ ဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ဖွတျသနျးခငျြတယျဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ စဈမှနျပွီးမှနျကနျတဲ့
(၂) လုပျသမြှအလုပျတိုငျးမှာ ရညျရှယျခကျြဦးတညျခကျြရှိပါစေ
ကိုယျလုပျသမြှအရာတိုငျးဟာသူမြားအတှကျဘာပဲဖွဈနဖွေဈနကေိုယျ့အတှကျတော့ ရညျရှယျခကျြရှိရှိဦးတညျခကျြရှိရှိ လုပျတဲ့အလုပျတဈခုဖွဈပါစေ။လူတဈယောကျဟာ ဘာကိုလုပျလို့လုပျမိမှနျးဘာကိုယုံကွညျပွီးလုပျနမှေနျးမသိပဲရညျရှယျခကျြကငျးမဲ့စှာနဲ့အရာရာကို လုပျဆောငျလာတာကွာတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုနညျးပါးလာပွီးစိတျဓာတျကကြာ အလိုလိုစိတျအားငယျတာမြိုးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။
တျောရုံတနျရုံနရောမှာ သူမြားကို အားမကိုးပဲလုပျနိုငျသလောကျလုပျကွညျ့ပါ။ တဈစုံတဈယောကျရှိမှသငျ့ဘဝအဆငျပွမေယျဆိုတာ မြိုးကို ဖယျထုတျနိုငျဖို့ ဒီနညျးကအကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့
သူမြားကိုသိပျအားမကိုးပဲ တဈယောကျတညျးလုပျလို့အဆငျပွမေယျထငျတဲ့အရာတှကွေရငျတဈယောကျတညျးလုပျကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့ရဲ့အစှမျးအစကိုလညျးပိုပွီးမွငျသာလာပါလိမျ့မယျ။
အလုပျလုပျရမဲ့အခြိနျမှာထိရောကျပွညျ့ဝစှာ အလုပျလုပျပွီးနားမဲ့အခြိနျမှာအပွညျ့အဝအနားယူပါ။ ဘယျသူမှအနားမပေးရငျတောငျကိုယျ့ကနျြးမာရေးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာအတှကျ လုံလောကျတဲ့အနားယူမှုမြိုးကို ကိုယျတိုငျဖနျတီးပေးပါ။
ကိုယျ့အတှကျခြီးကြူးသံတှကေိုကိုယျတိုငျဖနျတီးပေးပါ။ နစေ့ဉျကိုယျလုပျဆောငျတဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို အနညျးအမြားရယျ ထညျ့မထှကျပဲ ငါလုပျနိငျသားပဲငါတျောတယျေငါတိုးတတျလာပွီဆိုပွီး သူမြား ကခြီးကြူးစကားမဆိုရငျတာငျကိုယျ့အတှကျကိုယျခြီးကြူးစကားဆိုရငျးနရေ့ကျတိုငျးကိုတတျတတျကွှကွှနဲ့ ရှငျသနျနထေိုငျပါ။
(၆) ကိုယျ့ရဲ့စိတျကို ဘယျတော့မှမလိမျညာပါနဲ့
ဒါကတော့အဓိကအခကျြပါပဲ။ လူတဈယောကျအတှကျအပွဈအကွီးဆုံးဒုက်ခအမြားဆုံး လိမျခွငျးဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလိမျခွငျးပါပဲ။ လူတဈခြို့က အဖွဈနိုငျမှနျးသိလကျြနဲ့ဆှဲထားခွငျးတဲ့အရာမြိုးတှေ မဖွဈနိုငျမှနျးသိလကျြနဲ့ မခှဲခှာ နောကျမဆုတျခငျြတဲ့အရာမြိုးတှကွေောငျ့ ကိုယျ့စိတျကို ပါ ကိုယျပွနျလိမျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုကိုယျတကယျကွိုကျတဲ့အရာတှေ ကိုယျတကယျလိုခငျြတဲ့အရာတှကေိုဖုံးကှယျထားပွီး မလိုခငျြဟနျဆောငျရငျးကိုယျ့ရဲ့ပုံစံအမှနျကို ဖှကျထားရငျး နရေတာဟာ သိပျကိုပငျပနျးလှတာမလို့ ဘယျသူကွိုကျကျွိုကျမကွိုကျကွိုကျစိတျမဝငျစားပဲကိုယျ့ပုံစံကိုယျ့အကွိုကျတိုငျးပဲ ကိုယျရှငျသနျပါ။
ဒီလိုကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျတနျဖိုးထားတတျလာတဲ့လူတဈယောကျဟာ တဈခွားသူတဈယောကျဆီက မတ်ေတာတှတေနျဖိုးထားမှုတှကေို အခြိနျကုနျခံပွီးဘယျအခြိနျပေးမလဲ မြှျောလငျ့နတေော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီလိုကိုယျ့တနျဖိုးကိုယျသိတဲ့သူအနားမှာ မငျးတနျဖိုးကိုနားလညျလာတဲ့လူတဈခြို့ရှိနပွေီးသားဖွဈနတေတျပါတယျ။ဒါကွောငျ့သူမြားဆီက မတ်ေတာတှတေနျဖိုးထားမှုတှကေို ကွိုးစားရယူနမေဲ့အစားကိုယျ့ကိုယျကိုယျတနျဖိုးထားတတျအောငျနရေငျး အလိုလိုဖွဈလာမဲ့ လူတဈခြို့ရဲ့တနျဖိုးထားမှုကိုအဆငျသငျ့လေးရယူနိုငျပါစေ….
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုလူအတုယောင်တွေရှိနေတတ်သတဲ့.. သတိထားကြကုန်